PineTime, iyo isina mvura smartwatch yePine64 | Kubva kuLinux
Munguva pfupi yapfuura iyo nharaunda yePine64 (yakatsaurirwa kugadzira zvigadzirwa zvakavhurika) yakatanga iyo PineTime smartwatch iyo inogona kumira kunyudzwa mumvura pa 1 mita.
Iyo PineTime chishandiso chaimbove chaingowanikwa chete sekuvandudza kit uye zvemberi shanduro izvo zvaibvumidza nyore kuwana kune-pabhodhi debugging interfaces, asi ikozvino yave kutengeswa.
Midziyo yemidziyo ine itsva InfiniTime 1.2 firmware vhezheni uye yakavakirwa paNRF52832 MCU microcontroller (64 MHz) uye yakashongedzerwa ne512 KB Flash memory system, 4 MB Flash yedata remushandisi, 64 KB RAM, 1.3-inch touch screen ine resolution ye 240 × 240 pixels (IPS, 65K mavara), Bluetooth 5, accelerometer (inoshandiswa se pedometer), inzwa sensor uye vibration mota. Iyo bhatiri yekuchaja (180 mAh) inokwana kwemazuva matatu kusvika mashanu ehupenyu hwebhatiri. Kurema: 3 gramu.
Rega nditange nedzimwe nhau dzakanaka kune avo vari kumirira (im) nemoyo murefu kuti muise maoko enyu paPineTime - ini ndangoona kuti kugadzirwa kwebatch nyowani yePineTime kuri kufamba zvakanaka uye kana zvese zvikafamba sekuronga ipapo iyo! Yakavharwa yega PineTime mayuniti anofanirwa kuwanikwa kana ichi chinyorwa chichienda kurarama! Iyi PineTimes inogadziridzwa neshanduro dzichangoburwa dzeiyo uye InfiniTime bootloader, kuti ugone kuwana zvakanyatso kubva pawachi yako nguva yaunogamuchira.
Sezvatakazivisa mwedzi wapfuura, fekitori yanga yakamirira kuburitswa uku kutanga kugadzirwa kweiyo nyowani bato rePineTimes. Sechiyeuchidzo: kupfuurira kushomeka kwechinhu kwakamanikidza PINE64 kushandisa accelerometer yakati siyanei kune iyi batch nyowani, sezvo yekutanga yaive isisipo, uye InfiniTime yaida kuwedzera rutsigiro rweichi chip chip kuti uone maficha senge nhanho kuverenga uye kumisikidza pachiuno. kutenderera kwaizoshanda sezvaitarisirwa.
Iyo default firmware yechigadzirwa ndiyo InfiniTime uye inoshandisa iyo FreeRTOS 10 chaiyo-nguva yekushandisa system, iyo LittleVGL 7 mifananidzo raibhurari, uye iyo Bluetooth NimBLE 1.3.0 stack. Iyo firmware inoremedza yakavakirwa paMCUBoot uye iyo firmware inogona kuvandudzwa kuburikidza neOTA meseji inopfuudzwa kubva kune smartphone kuburikidza neBluetooth LE.
Uye zvakare, zvakakosha kuti uzive kuti shanduko dzakaitwa mushanduro nyowani dzinosanganisira kuiswa kweiyo «metronome» kunyorera, kuvandudzwa kwe «timer» kunyorera uye basa rekudzora kudyiwa kwe RAM uye ndangariro dzechigarire uyezve saizi firmware yaderera kubva ku420 KB kusvika 340 KB.
Iyo yekushandisa interface kodhi yakanyorwa muC ++ uye inosanganisira mabasa akadai sewachi (dijitari, analogog), chiitiko chekuita (moyo wekutarisa uye pedometer), iyo inoratidza zviziviso nezvezviitiko pane smartphone, tochi, kudzora kwekutamba mimhanzi pane smartphone, inoratidza rairo kubva kubhurawuza, chiringazuva uye mitambo miviri yakapusa (Paddle na2048).
Kubudikidza nezvirongwa, unogona kuona nguva iyo skrini rinodzima, iyo fomati yenguva, mamiriro ekumuka, chinja kupenya kwechiratidziri, ongorora mutero webhatiri uye iyo firmware vhezheni.
Pane mafoni uye makomputa, iwo maGadgetbridge (eApple), Amazfish (eSailfish neLinux) uye Siglo (yeLinux) anogona kushandiswa kudzora wachi. Iko kune rutsigiro rwekuyedza WebBLEWatch, webhu kunyorera yekuenderana mawachi kubva kumabhurawuza anotsigira Bluetooth Web API.
Uyewo, kune vanofarira nePineTime imwe nyowani firmware Malila yakagadzirirwa, zvichibva paRIOT OS, yakashongedzerwa neGNOME style interface (Cantarell font, icons uye GNOME maitiro) uye inoenderana neMicroPython.
InfiniTime uye Malila PineTime zvakare yekusimudzira iyo Zephyr firmware-yakavakirwa chikuva, Mynewt OS, MbedOS, TinyGo, WaspOS (Micropython-based) uye PinetimeLite (InfiniTime EEPROM yakagadziridzwa shanduko).
Pakupedzisira, kune avo vanofarira mudziyo, iwe unofanirwa kuziva kuti mutengo wayo uri $ 26,99 uye inogona kufanotemerwa kubva chinotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Noticias » PineTime, iyo Pine64 isina mvura smartwatch
Gaea, Mace uye Soar: Xiaomi Vhura Sosi - Chikamu 2